windows xp မှာ အသံမထွက်လို့ - MYSTERY ZILLION
windows xp မှာ အသံမထွက်လို့
ကျွန်တော် XP sp2 သုံးပါတယ်။ Windows Audio service လဲ start ဖြစ်ပါတယ်...
Norton endpoint တင်ထားပါတယ်။ Control panel ထဲ sound မှာ မှိန်နေပါတယ်။ MZ က အကို အမ များ ၀င်ဆွေးနွေးပေးပါအုံး.......
Control panel ထဲမှာ sound icon ကမှိန်နေတာဆိုရင်တော့ အဖြစ်များတာက Driver ကိုမသိဖို့များပါတယ်။ Device Manager ထဲတစ်ချက်လောကဝင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်.သေချာအောင်ပေါ့။
Device Manager ထဲက sound မှာတော့ ဘာ sign မှ မပြဘူး ခင်ဗျ.....
original driver cd နဲ့လဲတင်ကြည့်တယ် မရဘူးဖြစ်နေတယ်...
BIOS ထဲကနေပိတ်ထားမီရင်လဲအသံမတွက်ဘူး device manager ထဲမှာ ? ပေါ်နေတာလေးတွေရှိလားမသိဘူးနော်
အဲဒီ ? က unkown device လား multimedia controller ဖြစ်နေလားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်
XP SP2မှာဆိုရင်တော့ sound အတွက် patch files အရင် run ပေးရတယ် ဗျ
Song driver conflict ဖြစ်တာထင်ပါတယ်။
Driver update လုပ်ကြည့်ပါလား အကို။
ဒါမှအဆင်မရသေးရင် System Restore သာလုပ်လိုက်။ ရကိုရတယ်။
driver ကိုတစ်ချက်လောက်စစ် ကြည့်ပါလား တစ်ခါတစ်လေ driver အကုန်မတင်မိလို့လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်